Inter-kambani zvemukati kuchinjana kweiyo yanhasi midhiya yekupa cheni: anotsanangura | NAB Ratidza Nhau | 2021 NAB Ratidza Media Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza LIVE. Broadcast Injiniya Nhau
musha » Content Delivery » Inter-kambani zvemukati kuchinjana kweiyo yanhasi midhiya yekupa cheni: anotsanangura
Inter-kambani zvemukati kuchinjana kweiyo yanhasi midhiya yekupa cheni: anotsanangura
Chief Strategic Officer, Signiant
Muindasitiri yenhau yanhasi, kufambisa huwandu hwakawanda hwezvinhu nekukurumidza uye nekuchengetedzeka pakati pevakabatana iko kunetseka kwakakosha. Automated, inter-kambani kugovana zvirimo, pakati pemakambani eese saizi uye geographies, yakakosha mukugadzirwa uye zvakatonyanya mukuparadzira mafirimu ane simba uye akasiyana, terevhizheni, mitambo yemavhidhiyo, midziyo yeOTT / VOD, uye yavo inosangana zvikamu uye metadata pane akawanda mapoinzi mune yekupa cheni uye mhiri zviuru zvemapuratifomu.
Chokwadi chakakosha nhasi ndechekuti hapana sangano chitsuwa. Mitambo yemitambo inoshanda nevatepfenyuro uye marezinesi ekodzero dzenhau kutenderera pasirese; studio dzinogovera zvirimo kuma cinema, zviteshi zveTV uye vanoshanda netambo, mapuratifomu eVOD, uye mapuratifomu eOTT; uto revatambi vemitambo uye vanoedza kutenderera pasirese vanoshanda pamwechete kugadzira blockbuster zviitiko zvemitambo. Izvi hazvigoneke pasina yakasimba uye yakachengeteka kuchinjana zvemukati zvinogona kushanda zvese mukati nepakati pemakambani.
Kufambisa uye kuwana zvirimo pakati pezvikwata mukati mesangano zvinogona kunetsa mukati uye pachezvayo. Kugona kuzviita pamusoro pemasangano akasiyana kunongokudza kuomarara. Tichifunga nezve chimiro cheindasitiri muna2020, mashandiro emakambani ari echinyakare uye makambani anofanirwa kukwanisa kuchinjisa zvirimo zvakachengeteka uye mushe - izvo zvinofanirwa.
Inter-kambani zvemukati kuchinjana: kudyidzana kwepasirese, zvemukati zvemukati
M&E mabhizinesi anoziva kuti pane zvirikudiwa zviri kukura uye madhiraivha emabhizinesi anoda kudyidzana kuona kugadzirwa nekuparadzirwa kwavo zvemukati. Kuwedzera kwekuda kwezvinhu zvemunharaunda pane akasiyana mapuratifomu matsva zvinoratidzira kudiwa kwehukama hwakabatana pakati penzvimbo huru uye yakaoma yekutengesa. Kunyangwe kuri iko kudikanwa kwekuburitsa zvemukati zvekuparadzira pasirese pasirese kana nhabvu yemitambo inounza makwiriso kunetiweki yenhepfenyuro vadyidzani, vezvenhau mabhizinesi vanozviona ivo pachavo vachiwedzera kubatana, zvisikwa zvavo zvinowirirana zvakanyanya, uye kudiwa kwekutamisa zvirimo zvimwe uye zvakanyanya kukosha. Kuti iyi yakatove yakatsindirwa padandemutande ikozvino inosanganisira kuputika kwemafomati akasiyana uye mapuratifomu (theatre, masaiti ekushambadzira, nharembozha zvinoshandiswa) zvinongoisa kumanikidza kukuru kumasangano kukudziridza inochinjika uye yakachengeteka pakati -kambani zvemukati kuchinjana.
Nhasi M & E emakambani anokwanisa kugovera zvirimo pasi rese kune akawanda akasiyana mapuratifomu uye vanopa vachiita iyo-yekambani kufambisa yakakosha kupfuura nakare kose. Kunyangwe iri chikuva cheVOD ichiendesa zvirimo kune vanoshandisa tambo, dzimba dzekuparadzira mafirimu dzinotumira DCPs kumabhaisikopo, kana terevhizheni network inofambisa zvemukati mu playout, kugoverwa kwemazuva ano kunoda chinongedzo chakabatana chakatsigirwa ne otomatiki, yepakati-kambani kufambisa.
Tevedza-iro-zuva mutambo kuvandudza
Kana, funga nezve mugadziri wemutambo achishanda neakasiyana studio pane yavo yazvino blockbuster zita. Sezvo zvikwata zvesangano rimwe zvinoshandura kuvaka kwazvinotarisa, vamwe vazvo vanofanira kukwanisa kuvimba kuti vanogara vachigamuchira vhezheni yemutambo, kuitira kuti vasangoerekana vawana maawa ebasa ivo put in yaive yechinyakare vhezheni. Izvi zvinonyanya kudikanwa nekutevera-iyo-zuva mafashama emvura anovimba nezvikwata munzvimbo dzakawanda dzenguva. Kuita shuwa iro rakakodzera vhezheni yemutambo wekuvaka ndipo painofanirwa kuve apo vanhu vanotevera pavanogara pasi kuti vaite mabasa avo zvakakosha kugadzirisa mashandisiro akaomarara emaketani, kusangana nenguva dzakatarwa (kunyanya muindasitiri inonyatso kuzivikanwa nekutakura kwekupedzisira miniti) , uye kuchengeta, izvo zvingangotaridzika kunge mhirizhonga, yakarairwa uye inoshanda.
Dhata dzakaomarara dzinoisa senge mafomati-ne-mafomati
Ipo ichizvimiririra, kupindirana kwekambani kunoitika kazhinji panguva yekubatanidza uye kugovera, zvinogona zvakare kuve kunetseka panguva yekugadzirwa kwemukati mezvinhu. Kana post-yekugadzira studio uye dzimba dzeVFX dzichishanda pane chikuru blockbuster, ivo vanowanzo shanda nefreyimu-ne-fomati mafomati senge DPX kana EXR. Mune zviitiko izvi, maforodha ane mamirioni emafaira anoda kudzoserwa ku studio kana kunyangwe kune imwe post-yekugadzira imba, zvakare mune inotevera-iyo-zuva fashoni. Maturusi akajairwa anorwira neaya akaomarara data maseti uye saka software chaiyo yekumisikidza aya mafafabhuru anova akakosha.
Kubatanidza mabhizimusi makuru enhau nevadikani vavo veSMB
Rimwe dambudziko rakatambudza indasitiri nderekuti tekinoroji yepamberi inoshandiswa nemakambani makuru haisi kugara ichiwanika kunetiweki yevanopa zvidiki zvakakosha kumabhizimusi. Kufambira mberi kwetekinoroji yegore, kunyanya SaaS mhinduro, dzinobatsira kuputsa izvo zvipingamupinyi, zvichipa mabhizinesi madiki maturusi ane simba kutora chikamu zviri nyore mukutengeswa kwepasirese. Matambudziko ekuchengetedza anokudzwa kana uchishanda nemakambani mazhinji, mazhinji acho ari madiki. Kuve neyakajairika seti yezvishandiso kusangana neiyo yakakwira kuchengetedzeka zviyero zvinodikanwa neanhasi indasitiri hakusi kwoumbozha, asi chinodikanwa. Kwete chete izvo zvishandiso zvinochengetedza izvo zvavanenge vachichinjana, zvinofanirwa kuve nyore kuendesa, maneja, uye kuve akakwana-akakura uye mutengo wekutorwa nechero saizi bhizinesi.
Iyo Signiant inofambisa sei pakati-kambani kugovana zvemukati
Signiant agara ari mutengesi anovimbwa wekuchinjika-kambani zvemukati zvemukati muindasitiri. Yedu Manager + Agents chigadzirwa chinoshandiswa nemakambani epasirese epasirese ekugadzirisa zvemukati zvemukati mukati nepakati pemakambani. Yedu Media Shuttle chigadzirwa inobvumidza vanhu kuwana uye kugovana zvemukati kutenderera pasirese uye ikozvino zvinobatanidza anopfuura mabhizimusi makumi maviri neshanu eese saizi.
Patakatangisa Signiant Jet ™ gore rapfuura, takaunza pamwechete hunyanzvi hwedu mune otomatiki system-kune-system faira kufamba pamwe nehutungamiriri hwedu mune yegore-yechizvarwa SaaS. Izvo zvakaita kuti Signiant's advanced automation uye yekumhanyisa tekinoroji isvike kumakambani eese saizi uye zvakanyanya kudzikisira kukakavara kwemakambani makuru enhau pasi rose mukumisikidza otomatiki zvemukati kuchinjana nevanowirirana navo vadiki.
Pakutanga gore rino, Signiant akawedzera kugona kwayo pakati pekambani, achiwedzera isina kureruka asi yakachengeteka nzira kuJet yekushambadzira zvemukati zvemakambani. Nezvo, makambani maviri ayo maviri ane Jet anogona nyore uye zvakachengeteka kumisikidza muchinjikwa kuvimba, anotarisirwa zvachose kubva mugore. Uye zvakare, nemabhizinesi mazhinji uye akawanda anotora Jet, makambani anogona kuita kuti magumo avo aoneke muplatform yedu yekuwedzera kufambidzana pakati pekambani.
Kana kamwechete -trust-trust yavepo pakati pemakambani maviri, ivo vanogona kumisidzana zvakawiriranwa pamusoro pekutamisa mabasa uko mativi ese anokwanisa kuchengetedza zvakakwana kutonga kwavo kwega uye netiweki yavo. Hapana kugoverana kwepassword kana rumwe ruzivo rwakashata runodikanwa sezvo kubatwa ruoko kwese kunochengetedzwa zvakachengetedzeka mugore. Ichi chinhu chakakosha kubatsirwa uye musiyano weSigniant's patent hybrid SaaS papuratifomu iyo inodzora gore ndege inopa orchestration, kuoneka uye kugona kuwana asi zvirimo zvinofamba zvakananga kubva kune imwe kambani yekuchengetera kune imwe.
Inter-kambani yezvinyorwa zvemukati zvemazuva ano
Midhiya uye varaidzo indasitiri haina kumbobvira yasiyana zvakasiyana, kuwanda pasirese, kana kusimba kupfuura zvazviri nhasi, uye maitiro aya anongokurumidza. Iyo denda uye kukanganisa kwaro mumaindasitiri kunoratidza kudiwa kwekuchinja, kugona, uye kugona kubatana kune akakura uye akasiyana maketeni ekupa. Saka chii chaunofanirwa kufunga nezvekugadzirira iwe kunotevera indasitiri-inokanganisa chiitiko?
Kufambisa zvakanyanya kuomarara, hombe, dzakaomarara dhata pakati pemakambani munguva yemazuva ano zvinoda nzira nyowani. Inoda software inogona kushandira chero saizi-bhizinesi, iyo inogona kutora mukana wechero bandwidth inowanikwa, uye inogona kushanda nechero chengetedzo mhando. Inofanira kupa bhizinesi-giredhi chengetedzo uye kuoneka; mhinduro inopa kuvimbika kana nguva dzakatarwa dzakaomarara uye mamiriro ari kunetsa. Izvo zvinofanirwa kuve nyore kuendesa uye kushanda uye kubvumidza makambani kuti akurumidze uye apindure kune ane simba hunhu hweindasitiri. Signiant Jet ine yayo yepakati-yekambani kugona kwakagadzirwa chaizvo kuzadzisa izvo zvido.
Kufarira kudzidza zvakawanda nezveJet nekuzviona zvichiitika?
Previous: Kuburitsa Mugadziri
Zvadaro: GB MAABHARA ANORATIDZA KUCHENGETA SOLUTIONS ZVEZUVA IZVI KUVIRTUAL BROADCASTASIA